हलिउडका ५ उदाहरणीय प्रेमिल जोडी
फिल्मी दुनियाँमा प्रेम सम्बन्ध भनेको निकै जटिल हुने गर्छ । केही समय प्रेममा चर्चा पाएका फिल्मी दुनियाँका प्रेम जोडी पनि केही समयमा सम्बन्ध तोड्न लालायित हुन्छ । अझ भनूँ सम्बन्ध टिक्न सक्दैन । प्रेम सम्बन्ध मात्र होइन विवाह नै गरेका फिल्म क्षेत्रका अधिकांश जोडीहरूको सम्बन्ध धेर लामो समय टिक्दैन । यो विश्वभर नै देखिने साझा विषय हो । तर अधिकांश प्रेमिल जोडीको सम्बन्ध लामो समय टिक्न नसके पनि केही जोडी यस्ता छन् जो पर्दामा मात्र होइन वास्तविक जीवनमा पनि उत्तिकै सफल छन् । आज हामी कुरा गर्दै छौँ मनोरञ्जनको दुनियाँमा नाम कमाएका सफल र वास्तविक जीवनमा पनि सफल जोडीको । वैवाहिक सम्बन्ध लामो समय नटिक्ने र कुनै न कुनै विषयको कारण सम्बन्ध विच्छेद हुने हलिउडमा यस्ता केही जोडी छन् जो सबैको नजरमा उदाहरण बनेका छन् र सफल प्रेम सम्बन्धमा छन् । हेरौँ ती मध्य ५ जोडी जसले हामीलाई सत्य प्रेममा विश्वास गराउँदछन् :
१. टोम हान्क्स र रिता विल्सन:
टोम हान्क्स र रिता विल्सन हलिउडका सबैभन्दा प्रसिद्ध जोडीहरू मध्ये एक हुन् । यी दुईको भेट सन् १९८१ मा एक टेलिभिजन कार्यक्रमको सेटमा भएको थियो । सन् १९८८ मा विवाह बन्धनमा बाँधिएका यी जोडीको प्रेम र सम्बन्ध शास्त्रले सबैलाई मोहित गराउँछ । उनीहरू जहाँ जान्छन् त्यस ठाउँमा दुई बिचको प्रेम अनि सम्मान स्पष्ट देख्न सकिन्छ । केही समय पहिले चलचित्रको छायाङ्कनका क्रममा देश बाहिर गएका टम र रितालाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । दुवैले निकै समझदारी र आत्मविश्वासका साथ यस भाइरसलाई जितेर छोटो समयमा नै घर फर्किएका थिए । यति बेला विश्वकै उदाहरणीय कलाकार जोडी कोरोना सम्बन्धी जनचेतना जगाइरहेका छन् ।
२. जोन लेजेन्ड र क्रिसी ताइगेन:
सङ्गीत जगतका दम्पती, गायक जोन लेजेन्ड र मोडेल क्रिसी ताइगेन चार वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक रूप दिएका यी जोडी एक उदाहरणीय जोडी हुन् । जोन र क्रिसीका दुई सन्तान छन् जो सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छन् । उनीहरूका प्रशंसक का लागी निकै उदाहरणीय जोडी हुन् । उनीहरूको प्रेम र व्यक्तिगत जीवन खुल्ला र सुन्दर छ । लेजेन्डले आफ्नो २०१३ मा निकालेको चर्चित गीत पोपुलर को लोकप्रिय गीत 'अल अफ मी' उनकी जीवनसाथी क्रिसीलाई समर्पित गरेका थिए ।
३. बीयोन्से र जय जी:
हलिउडका सबैभन्दा खुसी जोडी हुन् बीयोन्से र जय जी । साङ्गीतिक दुनियाँका लोकप्रिय यी दुई नाम प्रेमको दुनियाँमा पनि लोभ लाग्दा जोडी हुन् । निकै बलियो साङ्गीतिक प्रस्तुति, गीत सङ्गीत लाई जन्म दिने देखी भव्य कार्यक्रममा जोडदार प्रस्तुति दिने उनीहरू सहयात्रा निकै चाख लाग्दो छ । यी दुईले एउटा सफल प्रेम जीवन त बाँचेकै छन् सँगै प्रेम र अटुट सम बन्धको पाठ पनि सिकाएका छन् । बियोन्से र जीका तीन सन्तान छन् ।
४. जस्टिन टिम्बरलेक र जेसिका बिएल:
अभिनेत्री जेसिका बीएल र उनका पति जस्टिनले हालै आफ्नो दोस्रो सन्तानलाई स्वागत गरेका छन् । एक दशक भन्दा बढी प्रेम सम्बन्धमा रहेर विवाह गरेका खुसीमय वैवाहिक जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरू एक अर्कासँग निकै सुखमय जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरूको प्रेम र प्रतिबद्धताले आगामी दिनमा सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने देखिन्छ । उनीहरूले लामो समय एक अर्कालाई बुझेर र समय दिएर विवाह गरेकै कारण सुमधुर सम्बन्ध बन्न सफल भएको हो ।
५. क्रिस हेम्स्वर्थ र एल्सा पाटकी:
चलचित्र 'एभेन्जर्स' का र एमसीयूका थोरको भूमिकाबाट चर्चित अभिनेता क्रिस हेम्स्वर्थले स्पेनिस अभिनेत्री एल्सा पाटकीसँग विवाह गरेका हुन् । सन् २०१० मा भेट भएका उनीहरूले त्यही वर्ष विवाह गरेका थिए । उनीहरूका तीन सन्तान छन् । आफ्ना सन्तान, व्यक्तिगत सम्बन्ध र आ आफ्नो करिअरका कारण उनीहरू चर्चामा आउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय यी दुईको प्रेम हेर्दा लाग्छ दुनियाँमा अझै साँचो प्रेमको स्थान छ । ​​